Obsi Mootummaa Daangaa qaba- Koomiishinii Poolisii Federaal – Kichuu
HomeAmharicObsi Mootummaa Daangaa qaba- Koomiishinii Poolisii Federaal
Obsi Mootummaa Daangaa qaba- Koomiishinii Poolisii Federaal
[OBN 07 01 2011] Rakkoon magaalaa Burraayyuu fi Finfinneetti mudate shiraan jijjiirrama eegalame gufachiisuf kan kaayyeffate ta’uu Koomiishiniin Poolisii Federaalaa beeksise. Koomiishinar Janaraalli Koomiishinii Poolisii Federaalaa Zaynuu Jamaal ibsa laataniin akka beeksisanitti dubbichi shiraan kan qindaa’e.
Walitti bu’iinsi akka mudatuuf maallaqa guddaadhan kan deeggarame ta’uus ibsaniiru. Hiriira magaalaa Finfinneetti gaggeeffamerratti jibbiinsii fi arrabsoon sabummaarratti xiyyeeffate dhaga’amuu isaatis himaniiru.
Namoonni yaada isaanii bilisaan ibsachuuf ba’an nagayaan gara qayee isaanitti kan deebi’an yammuu ta’u, gareen jeequmsaaf ijaarrame garuu saamichaa fi jeequmsa babal’isuuf yaaluusaa himan.
Haaluma kanaan naannoo Piyaassaa fi Markaatotti yaalin saamichaa akka ture eeraniiru. Hiriira har’a Arbaa Mincii fi Finfinneetti ba’ameen gochaan nageenya ummataa fi biyyaa booressu raawwatamuu isaa koomiishinar janaraal Zaynuun ibsaniiru.
Namoonni saamicha raawwachuuf turan to’atamuu isaanitis ibsaniiru.
Humna nageenyaarraa tokkorraa qawwee saamudhaaf kan socho’an irratti tarkaanfii fudhatameen namoonni 5 kan du’an yammuu ta’u, muraasni madaa’aniiru. Warreen hiriira ba’uun jeequmsa kakaasanis to’atamaa jiraachuu himan.
Hiriira Finfinneerratti boombin qabameera.
Jaarmiyaalee siyaasaa karaa nagayaatin qabsaa’uf gara biyyaa deebi’anirratti sochiin maqa balleessaa raawwatamuus yaadachiisaniiru.Dargaggoonnii fi ummanni humnoota ummata walitti buusuf socho’anii fi biyya diigus hojjetan mootummaa cinaa dhaabbatee akka ittisu waamicha dhiyeessaniiru koomiishinar janaraal Zaynuu Jamaal.
Amma ammaatti demokraasin yaa jajjabaatu jennee waan hunda obsaan ilaalaa turreerra kan jedhan koomiishinarichi, kana booda garuu humni kamuu amma qawwee nurraa saamuf yaalutti hin ilaallu; obsis daangaa qaba jedhan. Humni nageenyaa nageenyi ummataa akka eegamu, aggaammin biyya diiguu akka hin mudanne ni hojjeta jedhaniiru.
Biyya seerri jirutti nama ajjeesuu, qabeenya saamuu fi humnaan buluuf yaalun hin jiraatus jedhan.
Olaantummaa seeraa malee biyyi, demokraasii fi bilisummaan hin yaadamus jedhan. Shakkamaa fi yakkamaa yoo dandeenye seeran to’anna, kan didee qawwee saamuf yaalurrattimmoo tarkaanfii walgitaa ni fudhanna jedhan.
Jijjiirramni eegalame amma hundee fageeffatutti yaa obsinu jenneeti malee, saamtuu fi ajjeestuuf obsa hin qabnu jedhaniiru.Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisudhaaf tarkaanfii fudhatamuu qabu mara ni fudhanna jedhaniiru.
Hokkorri eegalame caasaalee siyaasaa lamaan akka hogganamu koomiishinar janaraal Zaynuu Jamaal himanii, sanaan walqabatee Finfinneetti namoonni gara 300, Burraayyutti sanaa ol to’atamuu ibsan himan. Qabeenyi saamame sassaabbamaa jiraachuu fi naannon Burraayyuu tasgabbiitti deebi’uus eeraniiru.
FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) is live now.
Dhiroo cituun milinikii nafxaanyoon quftee jirti Guyyaa har’a naannoo Addabaabayi Masqaalatti dorzeen tokko bombii wajjiin qabame jira.
Poolisii federalaattiin to’annaa jala olee jira ummaanni oromoo bakka jirtan hundaatti of eggannoo
OMN: Oduu Amma Nu Gahe Fulb 17 2018